Shina: Nakaton’ny polisy ny sekolin’ny fijirihana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2019 5:26 GMT
Raha nivadika ho fahatafintohinana iraisampirenena ny zava-nitranga fijirihana ny Google dia namoaka ny vaovao ny China Daily News fa nopotehin'ny polisy Shinoa ny sekolin'ny fijirihana lehibe indrindra ao amin'ny firenena ao Hubei tamin'ny volana Novambra 2009. Toa milaza ny tatitra fa raharaham-barotra tsy miankina ary tsy misy ifandraisany amin'ny governemanta ny fijirihana.
Araka ny vaovao avy any Hubei (tamin'ny alàlan'ny Mingpao Daily ao Hong Kong ), manana mpikambana miisa 180.000 ny sekolin'ny fijirihana, “Black Hawk Safety Net“. Nilaza ny Polisy tao Hubei fa naharay fitarainana avy amin'ny cybercafe izy ireo tamin'ny taona 2007 fa nojirihana ireo solosaina ary nitaky vola 8.000 yuan (mitovy amin'ny 1.000 dolara Amerikana) tamin'ilay tompony ireo mpijirika. Avy ao amin'ny Sekoly “Black Hawk” ireo mpijirika miisa telo ireo ary nosamborina tamin'ny volana Aprily 2008. Tamin'ny herintaona (2009), nosamborin'ny polisy ireo mpitantana roa lehibe ao amin'ity sekoly ity.
Nanazava ihany koa ny China Daily News fa:
Niantso ny Black Hawk Safety Net ho tranonkala lehibe indrindra amin'ny fampiofanana mpijirika ao Shina ny faritanin'i Hubei, izay malalaka ny fidirana ho mpikambana ary mamoaka teknika fijirihana amin'ny alàlan'ny lesona, rindrambaiko trojan sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra an-tserasera.
Nandray mpikambana VIP maherin'ny 12.000 ilay tranonkala hatramin'ny nitsanganany tamin'ny taona 2005, ary nahangona mihoatra ny 7 tapitrisa yuan tamin'ny saram-pikambanana. Maherin'ny 170.000 no nisoratra anarana ho mpikambana maimaim-poana.
Nilaza ny mpianatra iray 20 taona izay nisoratra anarana tamin'ny tranonkala fampiofanana amin'ny fijirihana miisa telo samihafa fa mitentina 100 ka hatramin'ny 2000 yuan ny lesona iray amin'ny fampiofanana mijirika.
“Nolazaina tamin'ireo mpianatra ny fomba fangalarana kaonty sy ny fampiasana ny rindrambaiko trojan. Mampiseho ny fomba fanoratana rindrambaiko indraindray ny mpampiofana,” hoy izy.
Nanombana ny fikambanana CERT ao Shina (amin'ny alàlan'ny Mingpao) fa nahazo tombom-barotra mitentina 10 lavitrisa yuan (1,3 miliara dolara Amerikana) ny raharaham-barotra fijirihana manerana ny firenena tamin'ny taona 2009. Mahazo ny fidiram-bolany amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny lesona fanoratana ny rindrambaiko sy ny fametrahana rindrambaiko Trojan amin'ny solosaina mba hangalarana torohay ny mpijirika.